‘अहिले राजतन्त्र फर्किने सम्भव छैन : डा. महत | khaltinews.com
‘अहिले राजतन्त्र फर्किने सम्भव छैन : डा. महत
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेता महतले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अत्यन्तै पूरानो र घनिष्ठ रहेको सुनाए । उनले भने,‘भारतसँग सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध बढि छ । साथसाथै, आर्थिक सम्बन्ध बढि छ । नेपालको कुल व्यापारको ६९ प्रतिशत आयात भारतबाट हुन्छ । चीनबाट १५ प्रतिशत हुन्छ । ५८ प्रतिशत निर्यातपनि हाम्रो भारतसँग छ । व्यापारको हिसाबले पनि भारत र चीनसँग अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध छ । लगानीको कुरा गर्दा भारतबाट आएको छ। चीनपनि लगानी भित्रिँदैछ । नेपालमा आउने पर्यटकपनि भारत र चीनबाट आउँछन् । भारतसँग आवातजावात बढि छ । चीनसँग हाम्रो राष्ट्रिय, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुँदैछ । भविष्यको विकासको लागि दुई देशबीच दुवै देशसँग फाईदा लिनुपर्छ । लगानीको स्रोतको रुपमा, पर्यटनको स्रोतको रुपमा र हाम्रो मार्केट सोर्सको रुपमा पनि भारत र चीन नै महत्वपूर्ण हुन् । आर्थिक सहयोग पनि दुवै मुलुकबाट प्राप्त गरेका छौं । दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रोसँग राख्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, चीनसँग पनि नेपालको सिमा विवाद रहेको उनले उल्लेख गरे । महतले भने,‘हुम्लामा कतिपय पहिलेका खम्बाहरु, पिल्लर सारिएका छन् भन्ने यता÷उता चर्चामा आएका छन् । यसबारेमा निश्पक्ष ढंगले विज्ञहरु बसेर हेर्नुपर्छ । छानबिन गरेर टुँगो लागोस् । भारतसँगको सिमाना पनि टुँगो लगाउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको सिमा विवाद टुँगो लगाउनुपर्छ । अहिले भएका सानातिना समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । भारतबाट रअका प्रमुख नेपाल आए । सेना प्रमुख पनि नेपाल आए । विदेश सचिव पनि आए । यी सबै रुटिन खालका भिजिट हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो सरकार ढाल्नको लागि (भारततिर संकेत गर्दै) षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर बोल्नुभएको थियो । भारतले हामीले कुनै भूमिका खेलेका छैनौं भनेर देखाउन खोजेको हो कि । भारतीय सेनाप्रमुखको भिजिट पनि नियमित हो । हामी दुवै देशबीच एक अर्काले मानार्थ दिने चलन छ । अहिले भर्खरै भारतीय विदेशसचिव आए । नेपाल र भारतबीच जे÷जति ईस्यु छन्, विवादका विषयहरु छन्, अब हल गरिनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतमा निमन्त्राण आएको जानकारीमा आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो । भारतसँगको सम्बन्ध अलिकति तल÷माथि भएको थियो । अब यसले सुधार गर्न मद्दत पुगोस ।’